Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress loogu talagalay Goobaha Ganacsiga | Martech Zone
Qaar ka mid ah caan-soo-saarka WordPress-ka ah ayaa lagu riixay qalab shakhsi ama macaamiil ku saleysan. Ka warran ganacsiga? Waxaan diyaarinay liistada waxyaabaha aan jecel nahay ee aan aaminsanahay inay u saamaxeyso dadka isticmaala ganacsiga WordPress inay ka faa'iideystaan ​​waxyaabaha ay ka kooban yihiin isla markaana natiijooyinka ku kaxeeyaan makiinadaha raadinta iyo warbaahinta bulshada, iyagoo adeegsanaya moobaylka, kaniiniga ama desktop-ka iyo inay si buuxda u dhexgalaan istiraatiijiyadooda bulshada iyo fiidiyowga.
Markii aan soo saaray qaar ka mid ah fiilooyinka caanka ah, marwalba waan ku faraxsanahay helitaanka iyo wadaagista waxyaabaha la shaqeeya ee qabta shaqo la yaab leh si kor loogu qaado, loo hagaajiyo, loona otomateeyo howlaha ka socda WordPress. WordPress plugins labaduba waa duco iyo habaar, in kastoo.
Dhibaatooyinka Plugin WordPress
Plugins-ka mararka qaarkood way baxaan godadka amniga in jabsadayaashu ay ka faa'iideysan karaan inay ku riixaan khayaanada bartaada.
Fidiyayaashu badanaa si buuxda uma isticmaalaan Heerarka koodhka WordPress, isagoo raaciyay aan loo baahnayn koodh sababi kara arrimo kale.
Plugins badanaa liidata horumartay, sababaya xogta gudaha ama arrimaha waxqabadka.
Plugins badanaa aan la taageerin, kaa tagaysa inaad ku tiirsanaato koodh laga yaabo inuu dib uga dhaco isla markaana ka dhigo bartaada mid aan waxtar lahayn.
Plugins wuxuu ka tagi karaa tan xogta keydkaaga… Xitaa kadib markaad tirtirto fiilada. Horumariyayaashu way hagaajin karaan tan, laakiin inta badan haka walwalin arrintaas.
Waxaan rumeysanahay in WordPress ay si dhab ah kor ugu kacday, oo ay ka dhaceyso waxyaabihii hore ee fiilooyinka ahaa ee keydkooda lagu keydiyey ka dibna ay gacanta ku ansixiyeen qalab cusub si loo hubiyo inaysan si xun u qorin. Maaddaama tusaalooyinka WordPress ee is-martigeliya ay kuu oggolaanayaan inaad rakibto wixii qalab ah, in kastoo, waa inaad sameysaa shaqada guriga ama aad ka heshaa ilo lagu kalsoon yahay oo talo bixinno ah.
Intaa waxaa sii dheer, qaar badan oo ka mid ah Liisaska ugu Wanaagsan ee WordPress waxaa loogu talagalay blogger shaqsiyan dhab ahaan diiradda ma saareyso ganacsiyada iyo dadaalkooda gaarka ah ee qaabeynta iyo horumarinta istiraatiijiyado nuxur leh oo gacan ka geysanaya kor u qaadista ganacsigooda. Hoos waxaa ku yaal isku day run ah oo run ah Qalabka WordPress ee ganacsiga waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa ugufiican muuqaalka balaaran ee WordPress plugins.
Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress ee ku lug leh oo loogu beddelo martida
DhacdoON - Haddii aad raadineyso inaad si fudud ugu darto dhacdooyinka, diiwaangelinta, meelo badan oo ka mid ah boggaaga WordPress, fiiladan ayaa labadaba si wanaagsan loo taageeray waxayna leedahay tan muuqaalada.
Foomamka cuf - Qaab dhismeed deg deg ah oo fudud oo leh qaabab kala geddisan qaabeynta oo si fudud loogu dhex daro adeegyada dhinac saddexaad sida PayPal, MailChimp, AWeber, iyo kuwa kale. Kudarayaasha iyo API ayaa diyaar u ah shaqeynta kor looqaaday.
Muuji & Share - plugin loogu talagalay qoraalka qoraalka laguna wadaagayo Twitter iyo Facebook iyo adeegyo kale oo ay ka mid yihiin LinkedIn, Email, Xing, iyo WhatsApp. Waxa kale oo jira dhisme Gutenberg ah oo u oggolaanaya isticmaaleyaashaada inay gujiyaan 'Share to Share'.
OptinMonster - Abuur foomamka ka-fiirsashada-soo-jiidashada ee u rogaya martida macaamiil iyo macaamiil. Ka dooro popups, baararka cagaha sabeynaya, is duljoogsashada, iyo kuwa kale si aad u abuurto foomka xulashadaada 60 ilbiriqsi oo siman.
Jetpack - Jetpack wuxuu sii wadaa inuu ku sii wanaajiyo noocyada bilaashka ah iyo kuwa la bixiyo ee kordhiya awooda bartaada WordPress. Laba astaamood oo muhiim ah waxaan aaminsanahay inay yihiin awooda wadaagga bulshada isla markaana ku qori karo kor u qaadista emaylka. Waxaa jira tan oo astaamo kale ah, in kastoo! Waxa ugu wanaagsan oo dhan, qalabkan waxaa soo saaray Automattic si aad u ogaato inuu ku qoran yahay loona hayo heerarka ugu sarreeya.
WooCommerce - barnaamijka ugu caansan eCommerce ee lagu dhisayo dukaan internetka ah. Woocommerce waxaa si buuxda loogu taageeray tan tan ah wax soo saar iyo waxyaabo dheeri ah kooxda at Automattic, soosaarayaasha WordPress.
Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress ah ee Kordhinaya Maamulkaaga WordPress
Bedelaad Ka Fiican - waxaa jira waqtiyo aad ubaahantahay inaad socodsiiso / badasho keydka xogta wixii kujira, xiriiriyeyaal, ama goobo kale. Qalabkani waa ikhtiyaar weyn oo lagu sameeyo taas.
Maareeyaha Tag Tag ee WordPress - maamul dhammaan qoraaladaada dheeriga ah iyo talaabooyinka kale ee ka socda Maareeyaha Google Tag. Qalabkaani wuxuu gaar u yahay WordPress oo wuxuu bixiyaa tiro xulashooyin ah.
Liiska Boostada Muuqaal Muuqaal ah - ku darayaa Image Image khaanadda farriimaha maamulka iyo liiska bogagga. Waxay u oggolaanaysaa maamulayaasha inay arkaan qoraalada ama bogagga leh muuqaal muuqaal leh.
Gaaritaanka Gawaarida Degdegga ah - Ma waxaad maareyneysaa waxyaabo badan oo qabyo ah? Hadday sidaas tahay, qalabkan kumbuyuutar wuxuu ku ridayaa dariiqa weyn maamul-kaaga oo si toos ah kuugu keenaya qabyooyinkaaga (iyo sidoo kale muujinta tirinta).
Qalabka Kit-ka ee Google - xalka hal-joogsi si loo geeyo, loo maareeyo, oo aragti looga helo aaladaha muhiimka ah ee Google si looga dhigo mid ku guuleysata barta internetka. Waxay bixisaa aragtiyo awood leh, oo casriyeysan oo laga helo badeecado badan oo Google ah si toos ah dashboardka WordPress si sahlan loo helo, dhammaantoodna waa bilaash.
Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress ku shaqeeya ee kor u qaadaya Mawduucaaga iyo Gaaritaankiisa
Meelaha Gaarka ah ee Casriga ah - U fududee maamulayaasha, qorayaasha iyo tifaftireyaasha inay qaabeeyaan boggaaga adigoo u fududeynaya maamulkiisa. ACF way fududahay in la hirgaliyo oo si heer sare ah loo habeyn karo. Iibso siyaado dheeri ah oo ruqsad haysta si aad uhesho astaamo yaab leh.
ARVE Embedder Fiidiyow Heer Sare ah - Fiidiyowyada gundhigu waxay noqon karaan riyo qaali ah oo loogu talagalay dayactirka qaababka ka jawaabaya bartaada. WordPress wuxuu asal ahaan ka shaqeeyaa daraasiin dhufto, laakiin ma hubinayo inay ka jawaabaan.
Easy Soodheelka Share-ka - Kuu suurtogelineysa inaad wadaagto, kormeerto oo aad kordhiso taraafikadaada bulsheed adoo adeegsanaya dhimis iyo habeyn Analytics muuqaalada.
SMTP WP fudud - U dirista ogeysiisyada WordPress, digniinta, iyo emaylada otomaatiga ah ee bixiyahaaga martigelinaya ayaa weydiisanaya dhibaato. Adeegsiga SMTP si aad iimayl ugu dirto adeeg bixiyahaaga idman ayaa aad uga ammaan badan waxayna yeelan doontaa ixtimaal sare oo ah in lagu soo dhiibo. Waxaan haynaa maqaallo muujinaya sida tan loo dejiyo Google or Microsoft.
FeedPress - FeedPress waxay si otomaatig ah wax uga qabataa dib u rogista quudinta waxayna cusbooneysiisaa quudintaada waqtiga dhabta ah mar kasta oo aad daabacdo qoraal cusub.
OneSignal - riixitaanka mobilada, riixida websaydhka, emaylka, iyo farriimaha app-ka ah. Ogeysiis macaamiisha leh qoraal kasta oo la daabacay.
Podcast Feed Player Widget - Kani waa aalad aan shaqsiyan u soo saaray oo caan ah. Haddii aad martigalineyso barnaamijkaaga 'Podcast' meelo kale, waad geli kartaa quudinta oo waxaad gelinkartaa qoraaladaada 'Podcast' dhinacaaga dhinaceeda ama waxaad isticmaaleysaa lambar gaaban oo ku dhex yaal bog ama boostada. Waxay isticmaashaa WordPress 'asalka HTML audio player.
GTranslate - U adeegso qalabkan iyo adeeggan si toos ah u turjun waxyaabaha aad ka kooban tahay isla markaana aad u hagaajiso boggaaga WordPress si aad u gaarto raadinta caalamiga ah.
Ku daabac Apple News - Waxay awood u siineysaa boggaaga wax ku qora ee WordPress in lagu daabaco kanaalkaaga Apple News.
Recently - Kudar wixi aad kuleedahay wixi aad udhowdahay waxyaalahaagii udambeeyay si aad uhesho xiriiriyeyaal gudaha ah iyo kaqeybgal badan. Qalabkaani wuxuu leeyahay tan xulashooyinka qaabeynta qaabeynta.
Soo noolee Posts Old - Maxaad kaliya u wadaagaysaa mawduucaaga hal mar markii aad wadaagi lahayd waxyaabo badan oo soo noqnoqda… wadashaqeyn wadid iyo inaad ogaatid maalgashigaaga maadadeed?
Qoraalada caanka ah ee WordPress - Kudar wixi aad kudhex dhigeyso waxyaabaha kuugu caansan si aad xawaare ugu sii hayso qoraaladaas iyo bogaggaas. Qalabkaan waxaa dhisay isla qoraaga Dhawaan, wuxuuna leeyahay qaabab dhismeyaal ah oo diyaar u ah inay sidoo kale aadaan!
WP Mail Log - haddii aad waligaa la yaabtay in emayl laga soo dirayo goobtaada iyada oo loo sii marayo PHP ama SMTP, WP Mail Log waa plugin muhiim ah si loola socdo farriintaada dibadda ah.
WP PDF - Cudurka PDF-yada moobiilka ku dhaji si fudud WordPress-kana ka ilaali daawadayaashaada inay soo dejiyaan ama daabacaan faylashaadii asalka ahaa.
Watar Isticmaalaha WP - WordPress hadda wuxuu kuu ogolaanayaa kaliya inaad isticmaasho avataar qaas ah oo lagusoo rogo Gravatar. WP User Avatar wuxuu awood kuu siinayaa inaad u isticmaasho sawir kasta oo lagusoo galiyay Maktabadaada Warbaahinta sidii avatar ahaan.
Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress ah ee lagu Kordhiyo Boggaaga WordPress
Saxeexa Xirfadaha Jilicsan - Hubiyaha Xiriiriyaha Jebiyey wuxuu kormeeraa oo tijaabiyaa dhammaan iskuxirayaasha gudaha & xiriiriyeyaasha dibedda ee bartaada iyagoo raadinaya xiriiro jajaban. Waxay kaa caawineysaa inaad hagaajiso xiriirinta xun si loo hagaajiyo SEO iyo khibrada isticmaale.
Qalabka Ugaarsiga Sawirka Kraken - Waxay ku fiicnaataa sawirrada iyo thumbnails duulimaadka, adiga oo awood kuu siinaya inaad hoos u dhigto cabbirka sawirka iyo waqtiyada xamuulka adiga oo aan lumin tayada.
StackPath CDN - Ku guuleysto waqtiyada xawaaraha bogga, qiimeynta Google ee wanaagsan, iyo beddelaad badan oo leh StackPath CDN. Setup waa mid fudud oo daqiiqado kaliya ayey qaadataa.
WordPress SEO -Math Rank waa Plugin SEO khafiif ah oo ay kujirto falanqaynta nuxurka bogga, khariidadaha bogga XML, qaybo hodan ah, dib-u-hagaajin, kormeer 404, iyo tan astaamo dheeri ah. Nooca pro wuxuu leeyahay taageero aan caadi ahayn oo loogu talagalay goosgoos hodan ah, meelo badan, iyo inbadan. Waxa ugu fiican oo dhan, koodhku si aad u wanaagsan ayaa loo qoray oo ma yareeyo bartaada sida ugu badan ee WordPress SEO plugins.
Rabshad WP - Samee WordPress si xawli ah dhowr guji. Tan waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay tan ugu awoodda badan ee kaydinta khabiirada WordPress.
Qalabka WordPress ee ugufiican ee loogu talagalay cookie iyo u hoggaansamida xogta
Ganacsi ahaan, waxaad u baahan tahay inaad u hoggaansanaato xeerarka caalamiga, federaalka, iyo gobolka ee xukuma sida aad ula socoto oo aad u ilaaliso xogta dadka ku soo booqda. Waxaan u adeegsan jiray aaladda 'Jetpack widget' rukhsadaha cookie-ka, laakiin badanaa waxay rartaa wax ka badan hal jeer oo ma lahayn xulashooyin habayn ah.
Oggolaanshaha Kukiyada GDPR (Diyaargarowga CCPA) - Qalabka 'GDPR Cookie Consent plugin' ayaa kaa caawin doona sameynta boggaaga GDPR (RGPD, DSVGO) oo u hoggaansamaya. Marka laga soo tago u hogaansanaanta GDPR WordPress plugin sidoo kale waxay taageertaa u hogaansanaanta cookie iyadoo la raacayo LGPD ee Brazil iyo Kalifoorniya Macaamilka Asturnaanta Macaamiisha (CCPA) oo ah sharci goboleed loogu talagalay in lagu xoojiyo xuquuqda asturnaanta iyo ilaalinta macaamiisha ee dadka deggan California.
Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress ee Ilaaliya Boggaaga WordPress
Akismet - Qalabka ugu caansan ee WordPress, Akismet ayaa suurtogal ah inuu yahay habka ugu fiican adduunka ee looga ilaaliyo balooggaaga faallooyinka iyo dib u celinta spam. Kaliya ha rakibin, ka warbixi kuwa jilicsan!
VaultPress - Ku ilaali nuxurkaaga, mawduucyada, waxyaabaha aad ku xirto, iyo dejimahaaga kaydinta waqtiga dhabta ah iyo iskaanka amniga ee otomaatiga ah
Diiwaanka Waxqabadka WP - Qalabka ugu badan ee waxqabadka WordPress ee qorista si aad u hayso diiwaanka isbeddelada isticmaalaha, fududeynta cilad-bixinta iyo aqoonsashada dabeecadaha laga shakiyo goor hore si looga hortago hacks-ka xun.
Ma u baahan tahay waxyaabo dheeri ah?
Waxaa jira waxyaabo aad u fiican, oo lacag bixin ah oo si buuxda loogu taageeray Dulucda inaadan meel kale ka heli doonin. Shirkadda waalidka ah, Envato, waxay qabataa shaqo weyn oo hubinaysa in fiilooyinka la taageero oo la cusbooneysiiyo badanaa.
Shaacinta: Waan ka faa'iideysanayaa lambarrada raacsan inta lagu jiro qoraalkan, fadlan taageer daabiciddayda adiga oo gujinaya oo iibsanaya!
Tags: Akismetplugins ugu fiicanugu fiican plugins WordPressplugins wordpress ganacsigaccpacdnplugin waafaqsansiyaasadda cookieGDPRqalabka googleciyaaryahanka PodcastPubSubHubbubmarin qabsi dhakhso lehxisaab xisaabeeddib u wareejinwaddoplugins widgetwidgetsWordPresslog xisaabinta wordpresswordpress plugin pluginwordpress cdnwordpress cdn pluginwordpress ecommerce pluginwordpress foomamka pluginplugins WordPresswordpress Podcast pluginwordpress smtp pluginwordpress plugin share bulshadawp gantaal
U dir Email Via SMTP Gudaha WordPress oo leh Google Workspace iyo Xaqiijinta Laba-Xaqiiqo
Jan 5, 2015 saacadu markay ahayd 11:21 PM
Liis aad u fiican iyo faahfaahin. Sidii caadada ii ahayd, qaar duug ah, kuwa la jecelyahay iyo kuwo cusubba waa inaan iska hubiyaa! Waad ku mahadsantahay wadaagista
Jan 6, 2015 saacadu markay ahayd 1:53 PM
Jun 28, 2015 at 11: 34 PM
Wax fikrad ah kama haysto sidaad u dhihi kartaa mid ka mid ah boggan waa mid la aqrin karo? Waxay ahayd inaan hoos u rogrogo wax aan akhriyo ka dibna umay qalmin. Haddii aad u maleyneyso bogga 3/4 ee badhannada midabbada dhalaalaya iyo soo-baxa sii xanaaqaya ee iga careysiinaya waa suuq-geyn ganacsi, markaa waad lumisay. Kaliya waxaan dhibsaday qoraalkan inaan wax kula wadaago, sidaad ila wadaagtay. Taasina waa LOOGU TALAGALAY DALKA. Waxaan u maleynayaa iskuulkii hore iyo tiknoolajiyada websaydhka inay si dhakhso leh ugu socdaan. Laakiin dhab ahaantii suuqgeynta wali waxay ku saabsan tahay dhisida xiriiro ganacsi iyo helitaanka macluumaadka kooxaha kula tartamaya? Layaabi maayo haddii aqlabiyadda aqristeyaashaadu ay midabbo yihiin. Xaqiiqdii waan ku socdaa jidkaas.
Jun 29, 2015 at 12: 31 PM
Waad ku mahadsan tahay jawaab celinta, Steve. Waxaan halkaan kuugu soo gudbineynaa halkan qiime la'aan adiguna aqristayaasheena waa labo-jibbaar dhowr sano. Waxaan aad ugu jecelahay inaan kusii wado u shaqeynta jihada taageerayaashayada, xayeysiiyayaasheena, iyo kafaala-qaadayaasheena. Hambalyo wanaagsan.
Jul 9, 2015 markay tahay 9:48 PM
Nabadoon Douglas! Blog xiiso leh oo aad halkan ku leedahay. Caawinaad weyn. Mahadsanid.
Jul 10, 2015 markay tahay 12:21 PM
Mahadsanid! Adigana waa lagusoo dhaweynayaa!